Akhriso Fariimo Jacayl oo Gacalisadada Ilin ka keenaysa, walibo iyadoo ooynaysa bay kusoo wacaysaa.. – Somali News
Akhriso Fariimo Jacayl oo Gacalisadada Ilin ka keenaysa, walibo iyadoo ooynaysa bay kusoo wacaysaa..
January 26, 2018 suldaan FARIIMAHA JACEYLKA 0
ilinkasta oo indhaha kasoo daadata waxay leedahay dareen gooniya,laakiin ilinta adiga dartaa iiga soo daatada waxay xal u tahay qalbigayga sababtoo ah qalbiga ayay ka tirtiraysaa xumaanta.
haddii aad rabto inaad oggaato jacaylkeena waxaad waydisa shimbiraha cirka duulaya sababtoo ah iyaga kaliya ayaa dareemi kara sida aan iskaga fakarno markastana waxay nagu arkaan anagoo banaanka fadhino macaanto jacaylkeena iskadaa bini aadanke xataa waxaa ka war haya xayawaanka.
macaanto waxaad daryeesha naftayda waxaad ka ilaalisa isha cadowga macaanto aniga haddaad cidlo igu siidayso oggoow waxaad fursad siisay cadowgeena macaanto jacaylkaaga adiga kaliya ayaa kor u qaadi kara.
qalbiga waakan kaliya ee kuxusuusta wuxuuna marka sawira dhoolacadayntada macaanto qalbigayga wuxuu raba waa adiga kaliya haddii aad qalbigayga hal mar dawaysid inta noloshayda ka dhiman waxaan ku noolanayaa farxad macaanto.
maalin dhowayd ayaa waxaa dhacday anigoo ka fakaraya ayaa si kadis ah waxaa iga timaaday ilmo, waxayna ku dhacday dhulka, kadib waxaan is iri ilinta soo qabo oo gacanta ku qabo, mise ilintii waxay ka badatay biyaha badda, taasina waa jacaylka aan ku qabo.
macaanto haddii aad i dhahdo waxaan rabaa inaan ogaado jacaylkaada, aniga isoo fiiri waxaadna fiirisa indhahayga hal daqiiqo, dhamaan jirkayga way wada seexanayaan waa haddaad hal daqiiqo kaliya aad indhahayga fiiriso, ma aqaan cabsida intaas le,eg meeshay ka timaaday macaanto indhahaga quruxda badan uma malaynayo inay ku yaalan qof kunool aduunka, waa tan aan iswaydiiyo markasta, macaanto waxaad tahay xuural caynta aduunka. xiriirkeena waa mid aad u fogaaday, wuxuuna marayaa inaan tusaale u noqono lammaane kasta oo cusub, waxaaana u nahay dhiirro galin, macaanto haddii aan kala tagno oggoow inay kala tagayaan lamaane badan oo aan farxadeena ku dhiirrogalin jirnay.
Fariimo Jaceyl Oo Calaacal Ah